Hordhaca Shirkadda - Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd.
Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd waa dhoofinta iyo dhoofinta ganacsiga e-commerce madal ay si wada jir ah u aasaaseen Kooxda Horumarinta Beeraha Anqiu, oo ah madal caasimadeed ay leedahay dowladda Shiinaha ee Shiinaha Reer Miyiga Innovation Port Co., Ltd. Shirkaddu waxay ku taal gudaha Dhismaha Anqiu Nonggu, koonaha koonfur-galbeed ee magaalada. Ku tiirsanaanta Anqiu waxaa ku jira wax soo saarka beeraha, sida maqaarka iyo sinjibiil. Iyadoo in ka badan 33,000 oo xarig sinjibiil ah, oo qiyaastii ah 50,000 oo xarimood oo goos goos ah oo ah faa iidada ugu weyn ee warshadeed, shirkaddu waxay ka go'an tahay inay dhisto goob ganacsi oo e-commerce ah oo alaabada dhoofinta ah, horumarinta sii socota ee daraasaadka warshadaha beeraha dhijitaalka ah ee Shiinaha, horumarinta astaanta. iyo horumarinta e-commerce-xuduudaha, ujeedadeedu tahay kor u qaadista beeraha dhijitaalka ah ee Shiinaha ee leh astaanta iyo horumarinta qaabab cusub sida habka xudduudaha xudduudaha, horumarinta qaab ganacsi cusub oo caalami ah.
Isku soo wada duub dhammaan xirfadleyda, maaliyadda, macluumaadka iyo teknolojiyadda, waxbarashada iyo dhacdooyinka kale ee dhaqaale ee casriga ah, ee loogu talagalay Shiinaha "dooxada beeraha" tacliinta tacliinta iyo ku saleysan, adeegsiga Macluumaadka Weyn, Xisaabinta Daruuraha, Silsiladaha silsiladaha, sida Internetka Waxyaabaha tiknoolajiyada ee isdhexgalka. , Dhisida iskudhaf maaliyadeed, cilmi baaris cilmiyeed, ganacsi, warshadeyn, beeraha, akadeemiyada beeraha iskudhafka qaabka cusub ee horumarinta ganacsiga e-ganacsiga ee xuduudaha isaga gudba, ujeedkiisuna yahay inuu gacan ka geysto kordhinta dakhliga beeraleyda, ka caawinta ganacsiga maxalliga ah horumarinta, beerashada Horumarinta beeraha Anqiu heerarka cusub ee kobaca dhaqaalaha, waxay dhisaan Shandong Weifang heer sare oo heer sare ah oo calaamadeeynaya dhoofinta dalka. Waxay gacan ka geysan doontaa koritaanka ganacsiga caalamiga ah iyo horumarinta dhaqaalaha adduunka, waxayna dhisi doontaa aasaas adag oo loo dhiso daaqad cusub oo furitaanka iyo horumarinta beeraha Shiinaha iyo xarun cusub oo iskaashi caalami ah.